हामीबीच रोक्न नसकिने 🥇 क्रिएटिव स्टप 🥇 🥇
हामीबीच रोक्न नसकिने
अघिल्लो खेल: कलम अनानास ..
अर्को खेल: तिनीहरू मध्ये लुकाउनुहोस् ..
ती ईम्पोस्टर रोबोटहरू यहाँ फेरि छन्! हाम्रो बीचमा रोक्न नसकिने एउटा नयाँ आर्केड खेल हो। खेलमा, तपाईं एक प्यारा ईम्पोस्टरको रूपमा खेल्नुहुनेछ र केहि रोचक रोमांचको अनुभव लिनुहुनेछ। प्लेटफार्ममा स्पाइक र अवरोधहरू जोगिन ध्यान दिनुहोस्। तपाईको कार्य भनेको जीवित रहन र अन्तमा पुग्नु हो। यो एक धेरै खतरनाक कार्य हो, किनकि तपाईं धेरै छिटो सर्नुहुन्छ, यदि तपाईंले कुनै प्रकारको अवरोध सामना गर्नुभयो भने, तपाईंले खेल पुनः सुरु गर्नुपर्नेछ, के तपाईं तयार हुनुहुन्छ? तपाईले चाहानु भएको चरित्र छनौट गरेर खेल सुरू गर्नुहोस् र तीन तह मध्ये कुनै एकमा, साहसको आनन्द लिनुहोस्।
# आर्केडAndroidब्लकचिकोकार्टुनहरूकार्यान्वयनहामी मध्येEspacioबचाउनुहोस्कौशलमोबाइलबच्चाहरुबाधाग्रहप्लेटफर्मसाल्टर